Bamshayele iBaroka wajika ukukhuluma uMcCarthy ngabadlali boSuthu - Impempe
Bamshayele iBaroka wajika ukukhuluma uMcCarthy ngabadlali boSuthu
January 23, 2021 January 23, 2021 Impempe.com
Ujike inkulumo wabancoma abadlali bakhe umqeqeshi waMaZulu FC, uBenni McCarthy ngemuva kokuba bemshayele iBaroka FC ngo 2-0 emdlalweni weDStv Premiership obuse-Old Peter Mokaba Stadium, ePolokwane ngoMgqibelo ntambama.
UMcCarthy kade ecula elinye iculo ezinsukwini ezimbili ngaphambi komdlalo weBaroka, egxeka abadlali bakhe ngokuthi abazimisele futhi nakanjani khona azobakhomba indlela ngemuva kokubambana neSuperSport United ngo 1-1 kade behamba phambili.
Kodwa ngoMgqibelo uMcCarthy ubesegcwele amazwi amnandi wodwa ngabadlali bakhe eze esebenzisa itemu eladunyiswa owake waba nguNgqongqoshe wezeMidlalo kuleli, uFikile Mbalula achaza ngalo iBafana Bafana seyiphoxile eyibiza nge”Bunch of losers” kodwa yena wathi abakhe abadlali bayi-“Bunch of winners” okusho ukuthi bangamaqhawe.
“Abesifanele lamaphuzu amathathu,” kusho komqeqeshi oneminyaka engu-43. “Bengikhathazekile ngokuza lana sisuka emdlalweni onzima njengalowa weSuperSport la okwakumele siphume namaphuzu agcwele kodwa sabhacaza. Ukuza la, kulokhu kushisa okungaka, uyazi laba bafana bangamaqhawe,” kuqhuba yena.
Uthe indlela abazikhandle nabebekhuthele ngayo abadlali bakhe bamfake umfutho kwayena. “Uma ungumqeqeshi wehluleka ukuphumelela kodwa ube unabadlali abanjena abazimisele ukusebenza kanzima, abazimisele ukulwa nokuba ngcono…. (Ayikho into yakho.)
“Emdlalweni wanamuhla siqale ngegiya esaqeda ngalo kwiSuperSport, besimzweni omuhle. Kodwa vele besilokhu sidlala kahle futhi kubonakala ukuthi siyeza isikhathi sokuthi siqale sithole umvuzo.
“Bekushoda ukuthi sibe bukhali phambi kwamapali, manje sengicabanga ukuthi sizomangaza amaqembu amaningi ngoba uma sesiwashaya amagoli sizobe sesiziwolela nje amaphuzu,” kuchaza uMcCarthy oseke waqeqesha iCape Town City phambilini.
Uthe kwakhona ngoMgqibelo ucabanga ukuthi bashaye amathathu kwawukuthi unompempe uyalilandula elesithathu ethi uBongi Ntuli ubesesendaweni engamfanele ngesikhathi elingqofela phakathi.
“Sishaye amabili namuhla kanti ngikholwa wukuthi sibe nebhadi ukuthi engabi mathathu. Ngisafuna ukulibona leliya ebelingqofwe wuBongs ngoba la bengikhona ngibone ngathi bekumele kube yigoli,” kuchaza yena.
Ezakamuva, iDStv Premiership, Uncategorized
Previous Previous post: IPirates izabalaze yaphuma nawo ephelele amaphuzu kwiMaritzburg
Next Next post: Usale ekhala ngokucucuza kwezakhe phambi kwamapali uMiddendorp eshaywa yiPirates